किरणले किन टाइटल जित्नु पर्छ ? — Purbicommand
२०७८ श्रावण ११, सोमबार ०३:१३ गते
किरण गजमेर मेरो लागि नयाँ नाम होइन अनि म जस्तो अन्य धेरैको लागि पनि नयाँ नाम होइन भन्ने लाग्छ । किरण गजमेर भूटानी शरणार्थीको रुपमा जन्मे । पुर्वी नेपालको झापा स्थित खुदुनबारी भूटानी शरणार्थी शिविरमा हुर्के । उनलाई आफ्नो देश भनिएको ‘भूटान’ कस्तो छ थाहा छैन होला सायद । उनलाई यति थाहा छ, उनी नेपाली भाषी हुन् । नेपाली भाषा, गीत, सँगीत अनि साहित्यलाई बाल्यकालदेखि माया गर्दै आएका किरणले आफ्नो बाल्यकाल बाडो दुख अनि संघर्षपुर्ण तरिकाले बिताउनु परेको थियो शरणार्थीको रुपमा । बाल्यकालदेखि नै गीत सँगीतमा लगाव भएका किरणले अमेरिकाको मिजौरी प्रस्थान पछि झनै मज्जाले आफ्नो सँगितिक यात्रा अगाडि बढाए । यहाँ (अमेरिकामा) आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा आफ्नो सँगितिक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्ने उनै किरण, अहिले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ -३ मा आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेका छन् । किरण, भूटानी शरणार्थीको रुपमा जन्मे, तर उनी नेपाली भाषी थिए । अहिले अमेरिकन नागरिक बनिसकेका छन् तर, उनी अझै पनि नेपाली भाषी नै हुन् । उनको शरणार्थीको अवस्था परिवर्तन भएको छ तर नेपाली भाषी अनि जाती जस्ताको त्यस्तै छ । उनको एक एक थोपा पसिना अनि रगतमा नेपाली पन छ । अहिले किरणले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल-३’ मा नेपाल बाहिरा रहेका नेपाली भाषीहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । उनले सिँगो समाज मात्र नभएर एउटो सिँगो जातीको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । नेपाल देश बाहिर पनि नेपाली सँगीतलाई माया गर्ने, नेपाली सँगीतलाई सम्मान गर्ने अनि बडो मज्जाले नेपाली गीत गाउनेहरू छन् भन्ने विशेष सन्देश किरणले संसार सामु सम्प्रेषण गर्न सफल भइरहेका छन् । अब रहयो, किरणले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल-३’ को टाइटल किन जित्नु पर्छ ? या किरणलाई हामीले किन जिताउनु पर्छ ? भन्ने विषय ! हुन त किरण, प्रतियोगितामा सहभागी जित्नकै लागि भएका हुन् । प्रतियोगिता हो, जे पनि हुन सक्छ, तर उनले टाइटल किन जित्नै पर्छ त ? आउनुहोस्, केहि कुरा गरौ,
नेपाल बाहिरा पनि नेपाली भाषा बोल्नेहरुको ठूलो जमात छ । नेपाल बाहिरा बस्ने नेपाली भाषीहरु पनि नेपाली नै हुन् । धेरैले भनेको सुनेको छु, नेपाली हुन नेपाली नागरिकता चाहिन्छ, जुन देश बाहिरा बस्ने नेपाली भाषा बोल्ने धेरै नेपाली भाषीहरुसँग त्यो छैन । नेपाली हुनको लागि नेपाली हुनु पर्छ, नागरिकता नै प्रमुख आधार हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । किरणले टाइटल जिते भने, नेपाल बाहिरा (प्रवासमा) बस्ने नेपाली भाषीहरु पनि नेपालमा बस्ने नेपाली सहर नै रहेछौ भन्ने कुरा झनै दार्बिलो तरिकाले प्रमाणित हुन्छ । हामीहरुले नेपाल बाहिर बसेर लेखेको, गाएको, अनि निर्माण अनि प्रकाशन गरेको नेपाली भाषाको कुनै पनि विषय वस्तुहरु नेपाल भित्र पनि त्यति नै महत्वपुर्ण हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । आउँदो हाम्रो भावीपुस्तालाई हामी नेपाली हौ अनि नेपालमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरु या अरू कुनै कार्यक्रमहरु पनि हाम्रै कार्यक्रम हो भनेर भन्न मज्जाले सक्छौ । नेपाली गीत सँगीत अनि साहित्यको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार बडो उत्कृष्टताको साथ हुन्छ । किरणले, हामी सिमितको लागि मात्र जित्नु पर्दैन न कि उनले उनको लागि मात्र ! किरणले सम्पुर्ण नेपाली गीत सँगीत क्षेत्रको लागि जित्नु पर्छ । सम्पुर्ण नेपाली दर्शकहरुको लागि जित्नु पर्छ । अहिले किरण रियालिटी शो’को टप ८ मा पुगिसकेको छन् । अब धेरै भोट प्राप्त भयो भने फाइनल राउण्डमा पुग्छन् अनि अझ धेरै भन्दा धेरै भोट प्राप्त भए विजेता हुन सक्छन् । किरणले टाइटल जिते भने, नेपाल बाहिरा बस्ने पहिलो नेपाली भाषीले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को टाइटल जिते भन्ने इतिहास रहने छ । उनले इतिहास रूच्ने छन् । इतिहास लेखिने छ ।
डलरको कुरा पनि गरौ है त !
किरण गजमेर डलरको कारण, टप-८ सम्म पुगेको हो अनि फाइनल पनि डलरकै कारण जित्न सक्छ भन्ने बडो आपत्तिजनक कमेन्टहरु देख्न पाइन्छ । यो एउटा कलाकारप्रति गरिने सबै भन्दा घृणित कमेन्ट हो । के किरणलाई अमेरिकाबाट मात्र भोट गइरहेको छ भन्ने लाग्छ? यदि त्यस्तो कसैलाई लागिरहेको छ भने, त्यो सबै भन्दा ठूलो भ्रम हो । नेपाल भित्रै पनि किरणको धेरै समर्थकहरु छन्, जसले किरणलाई रियालिटी शो’को सुरुदेखि नै भोट गरिरहेको छन् । हुन् त, पैसा हुनेले पैसा अनि डलर हुनेले डलर नै खर्च गरेर भोट त गर्नै पर्ने हो । किन कि कार्यक्रमको वनावाट नै त्यस्तै छ । भोट गर्न अब पैसा नै चाहिन्छ । भोट गर्न पैसा अनि डलर प्रयोग हुने नै हो । सहभागीहरु आफैले टाइटल जित्दैनन्, उनीहरूलाई टाइटल जिताउनु पर्छ । यस्तो बेला डलरको कुरा गर्नु कुनै पनि हालतमा ठिक होइन नत्र, अरु कसैले कुनै पनि टाइटल जितेको खण्डमा प्रतिभाले भन्दा पैसाले टाइटल जितेको भन्ने नजिर नराम्रोसँग बस्ने छ । यस्तो टाइटल जित्नको लागि प्रतिभा अनि भोट सबै चाहिन्छ । प्रतिभा कलाकारसँग हुनु पर्छ, जुन किरणसँग छ अनि उनलाई जिताउन भोट उनको समर्थकहरुले गर्नु पर्छ, जुन नेपाल अनि अन्य देशमा बस्ने उनको समर्थकहरुले पैसा र डलर खर्च गरेर गरिएको छन् ।
अब कुरा गरौ किरणले टाइटल नजिते के हुन्छ ?
किरणले टाइटल नजितेको खण्डमा आकाशै खस्नेवाला चाहिँ होइन । त्यस्तो धेरै नराम्रो हुने केहि पनि होइन । अक्सर प्रतिभाहरुले प्रतियोगिताहरुको टाइटल जित्दैनन् तर नेपाली सँगीतिक क्षेत्रमा चम्किलो तारा झै चम्किरहन्छन् । हामी अन्य धेरै प्रतिभाहरु हेर्न सक्छौ, न त निशान भट्टराई या प्रताभ दासले नेपाल आइडलको टाइटल जिते, न त प्रविन बेड्वालले नै जिते, न त रचना रिमाल अनि अस्मिता अधिकारीहरुले जिते ! तर उनीहरु पछिल्लो चोटिका व्यस्ता गायक गायिकाहरु हुन् ।कुनै पनि प्रतियोगिताको टाइटल जित्नु ठूलो कुरा हो तर त्यो नै हरेक प्रतिभाको मापन होइन भन्ने चाहिँ लाग्छ । किरणको प्रतिभाको मापन गर्नको लागि उनले टाइटल नै जितिरहनु पर्छ भन्ने त होइन तर नेपाली गीत सँगीतको प्रचार अनि अन्तराष्ट्रीयकरण गर्नको लागि भए पनि जित्नु चाहिँ पर्छ । किरणले टाइटल जितेनन् भने, म चाहिँ सधै भनिरहने छु, नेपालमा आयोजना हुने कुनै पनि रियालिटी शो’हरुको टाइटल, आउट अफ द कन्ट्री दिँदैनन् रहेछ भनेर । किरण, बहुप्रतिभाशाली कलाकार हुन् । उनी, गायक मात्र होइनन्, सॉगीतकार अनि रचनाकार पनि हुन् ।मलाई अझै सम्झन छ, किरण त्यति बेला शिविरमा आयोजना भएको भूटानी बाल तारा प्रतियोगितामा ‘बाल तारा’ हुन सकेनन् । त्यति बेला प्रविण दियाली भन्ने भाई बाल तारा भएका थिए, किरण दोस्रो भएको थिए । तर किरण, अब दोस्रो हुनु हुँदैन । किरण, पहिलो नै हुनु पर्छ । किरणले आफ्नो प्रस्तुति बडो उत्कृष्टको साथ ‘ द भ्वाइस अफ नेपाल’ को स्टेजमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, अब हाम्रो पालो, किरणलाई भोट गरेर जिताऔ अनि इतिहास निर्माण गरौ !!
हाल- अमेरिका, कोलोराडो